[updated 09:30 alatsinainy] Voafitaka hatrany ny VIVA dia namitaka hatrany tsy fidiny? | Hevitra MPANOHARIANA
[updated 09:30 alatsinainy] Voafitaka hatrany ny VIVA dia namitaka hatrany tsy fidiny?
2009-01-18 @ 18:49 in Politika
Nanandrana nitsapa ny VIVA TV aho ary tsapa fa mandeha ny herinaratra ao amin'ny foibe fandefasantsary ao. Tsy nametraka sary na inona na inona anefa ry zareo fa mainty be fotsiny ny efijery! Midika izany fa efa nidirana ny biraon'ny fampielezan-tsary. Efa mandika ny didy fandrarana fandefasana azy izany ny mpitolona.
Nojerena indray ny fantsona misy ny VIVA TV ka efa misy tokotanin-doko manga ary sisiny laoranjy ny sary!
Niverina nitsapa hatrany aho ka manjavozavo ao anatin'ny loko voalaza teo ny sarin'i Andry TGV tamin'ny biletà faran'ny taona 2007 iny. Miandry ny fanombohana fotsiny sisa izany ny rehetra! miandry ny mety ho fiambenana ataon'Antananarivo ity toby ity ihany koa aho.
Tapaka ny feo tao amin'ny VIVA Radio, tsy herinaratra tapaka fa mety ho tsy fetezana teknika! naharitra atsasak'adiny izany fatahapahana izany ka tamin'ny 11:05 indray vao niverina ny hirahira. By the river on Babylon nohirain'i Boney M no nisantarana ny fiverenan'ny feo!
Tapaka nandritra ny ora telo mahery ny jiro ny teto amin'ny faritra misy ahy eto Antananarivo. Nanomboka tamin'ny efatra ora sy sasany izany fahatapahana izany ka tsy niverina raha tsy tamin'ny fito ora mahery teo. Maro ny faritra tapaka jiro tahaka izany teto an-drenivohitry Madagasikara. Tsy hoe fahatapahana maina tsy akory io fa orambatravatra kosa no nisy teto amin'ny tanàna e! Nandritra izany fotoana izany no niantsoan'ny namana ny tena fa noraofin'ny miaramila izany hoe ny fitaovam-panapariahan-tsarin'ny Viva teny Ambohimitsimbina tokony ho tamin'ny telo ora tolakandro teo ho eo. Nisy ny antso sy resaka nataon'ny mpanao gazetin'ny Viva tamin'ny Ben'ny tanànan'Antananarivo izay nanentana ny vahoaka hirodorodo hiambina ny foiben'ny Viva eny Ambodivona.
Anjatony araka ny filazan'ny mpanao gazety tao ihany moa no tonga teny na dia mbola avy aza ny orana. Resaky ry zareo avy eo ny filazana fa karazana halatra mihitsy no natao, na dia mpitandro ny filaminana aza izy ireo, satria tsy misy taratasy ofisialy akory nakana izao fitaovana izao fa taratasy blocnote kely fotsiny no navelan-dry zalahy rehefa nandeha izy. Tamin'ny fito ora sy fahefany anefa dia niova indray ny resaka ka i Rolly Mercia no nanonona fa misy taratasy ofisialy nosoniavin'ny minisitry filazam-baovao Bruno Andriatavison nanambara fa noesorina tamin'ny VIVA TV mihitsy ny fahazoan-dalana hampiely sary ary noraofina (réquisitionné) avokoa ny entana tao anatiny, ary ny taratasy faharoa dia ilay blocnote teo ihany izay mitanisa kosa ireo entana rehetra noraofina. Izany ary no izy hoy ny mpanao gazety hafa koa aoka tsy hisy filazana hafa intsony na tsaho hafa intsony izay miely be loatra amin'izao fotoana izao. Tratra fanindroany indray izany ny VIVA Radio fa nampiely vaovao tsy marina tsy fidiny saingy tsy tezitra amin'izany aloha aho e!
Zavatra hafa manaraka indray, efa nisy ihany koa ny filazana tamin'ny Radio VIVA niaraka tamin'ny fandraofana ny entana teo manonona fa "mangoron'entana amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny MBS". Mbola maty jiro moa aho amin'io fotoana io fa nampita ilay vaovao teo tamin'ny namana hafa tany amorontsiraka tany. Io namana nantsoina io no nilaza tamiko fa mandeha soa amantsara ny tele MBS aloha. Efa notsapaiko tamin'ny finday anefa fa dia mandeha soa aman-tsara ihany koa ny Radio MBS. Mahalasa saina ihany raha olona lazaina ho mangoron'entana no mbola mandefa sary sy feo ihany. Mahalala namana any Anosipatrana mipetraka akaikin'ny foiben'ny MBS mihitsy aho, nanontaniako indray io ary dia nahafantatra avy hatrany ny tiako hanontaniana. Namaly ahy avy hatrany izy fa efa nandeha nanamarina mihitsy teny amin'ny foiben'ny MBS ka tsy mahita izay fangoronan'entana nolazain'ny VIVA Radio izany fa miasa soa amantsara ny olona ao. Mbola tratra fanintelony indray ny Radio VIVA. Aleo ny mpanaraka ny VIVA Radio no hanamarina na handiso izay nolazaiko izay satria mba mpanara-baovao ihany no nanome ahy izany bolongam-baovao izany.
Lafiny hafa indray, Nitsidika olona maratran'ny trano nianjera nefa vao notokanana tamin'ny sabotsy heriny teo tany amin'ny hopitaly ny minisitry ny fahasalamana, hoy ny TVM. Io trano nirodana io dia ao anatin'ny faritry ny zaridainan'Andohalo mahafinaritra dia mahafinaritra iny. Ny nampirodana azy araka ny nolazaina dia noho ny hanifin'ny rindrina ihany ka raha vao naherihery ny orana androany dia tsy zakany intsony ny hijoro ho reharehan'Iarivo. Maty aho 88 000€. Tena tsy mety marina mihitsy tokoa izany fampandrosoana haingana sy maharitra izany satria rehareha ilay hoe latsaky ny herintaona dia vita ny zaridaina sy ny mombamomba azy. Voalaza fa hiantohan'ny fanjakana manontolony fikarakaraka ity maratra ity.
Raha nantsoina hirodorodo hamonjy an'Ambodivona ny vahoaka hiaro ny foiben'ny VIVA dia nasaina nody indray satria be loatra angaha fa aleo 50 ihany no hiambina ao, 50 hafa no hiambina ny eny Ambodivona. Tenin'ny Ben'ny tanàna izany. Nanditra izany fotoana izany nanambara ny Ben'ny tanàna fa ny Radio VIVA ihany no tokony henoina fa ny radio VIVA ihany no milaza ny vaovao marina. Noadinoiny indray ny Radio Antsiva izay mba nolazain'ny mpanao gazetin'ny VIVA tokony hambenana! Dia lasalasa indray ny eritreritro hoe fa ny fahalalaham-pitenenana ve no tena tiany arovana sa ny tombotsoan'ny tenany ihany... noho io fanadinoana "kely" io. Mampieritreritra ny tolona! Toa lalaovina ny vahoaka araka ny fijeriko azy na dia lazaina ho fomba fandaminana ihany aza izany. Raha misy moa ny mahay manazava azy ianareo arahaba soa arahaba tsara tompoko fa izany indray no ampitaiko.
Saika adino, resaka VIVA TV sy Radio fotsiny no tena nivalampatra nandritra ny savaravina nifanaovana tamin'ny Depiote Raharinaivo Andrianatoandro.
Mbola nantsoina indray mandeha indray ny vahoaka halina, afa efa natory aho aloha! antsoina, ampodiana dia antsoina indray! tsy naleo ve niambinia daholo satria alina voalohany? Tena zary kilalao e!
Filazam-baovaon'ny onjam-peo tsy miankina any amin'iny faritra Atsinanana iny no nandrenesana nandritra ny fifampiarahabana nahatratra ny taona omaly alahady tao amin'ny Faritra ny kabarin'ny Lehiben'ny Faritra Atsinanana izao teny manaraka izao: "Maro ny asa hatrehin'ny faritra amin'ity taona vaovao 2009 ity, voalohany amin'izany ny fandrakofana ho tara (goudron) ny lalan'ny tampontanànan'i Mahanoro, manaraka izany ny fambolena voanio (palme) izay hiaraha-miasa amin'ny orinasa Daewoo Logistic, ka amin'ity taona ity izany no atomboka..." Mampieritreritra ry zareo izany vaovao izany raha marina tokoa... efa ady koa manko ny filazam-baovao amin'izao fotoana izao saingy ny eto moa manakaiky ny mivantana mandrakariva ny hamoahana azy.
Alatsinainy 19 janoary 2009
Miverina amin'ny filazany indray ny ao amin'ny Radio VIVA. Odiany tsy fantatra indray ilay taratasy misy sonian'i Bruno Andriantavison, Minisitry ny fampahalalam-baovao. Nijery ny lafiny lalàna ny amin'ny nakana ny kojakojam-pampielezam-peo sy sary teny Ambohimitsimbina indray ry zareo. Nambara indray araka ny fanazavana fa famakiana trano no natao teny Ambohimitsimbina iny ary azo sary ny namakiana ny trano tamin'izany. Soa ihany aho fa efa nitantara, nihafiana tsy nandehanana nivavaka tany am-piangonana mihitsy hitandroana ny marina sy ny fandehan-draharaha omaly alahady ka nahita mazava ny efijerin'ny fantsona Viva TV misy ny sarin'ny Ben'ny tanànan'Antananarivo.
Tsy misy ilàna izany famakiana varavarana izany intsony satria ry zareo ao amin'ny VIVA ihany no efa namaha ny fitomboka nanidy ny varavarana tsy idirana amin'ny biraon'ny VIVA TV; efa nandika lalàna mazava sady azo lazaina hoe tratra ambodiomby, satria mbola tsy tena any aminy aloha ny fahefana, ny ao amin'ny VIVA ka tsy hitako intsony izay mbola lazaina fa tokony hiandry ny didim-pitsarana ny ao amin'ny fitondram-panjakana raha hanala ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ny fahazoan-dalan'ny VIVA TV.
Fa inona moa no tena ady miafina mangotraka tao ambadik'ity fakan'ny miaramila ny kojakojam-pampielezam-peo sy sarin'ny VIVA ity (marihina fa mbola mandeha soa aman-tsara izany ny VIVA Radio amin'izao fotoana izao matoa miresaka ry zareo). Nametraka fanamby ny tompon'ny VIVA fa tsy maintsy handeha ny VIVA TV amin'ny alahady amin'ny fito ora tolakandro, tsy niteny ny avy amin'ny fitondram-panjakana nefa fantatra kosa fa misy zavatra kononkononina ao ambadika ao. Mazava loatra fa tsy nahatontosa ny fanambiny ny Ben'ny tanànan'Antananarivo rehefa nalain-dry zalahy ireo kojakojam-pampielezan-tsary ireo.
Manaraka izany dia voizina mafy dia mafy ihany koa ny tokony hanakatonana ny MBS amin'izay satria io no tena mandika lalàna voalohany amin'izao fotoana izao. Mety ho avy izany afaka kelikely eo ny fanafihana ny MBS izany efa nodradradradraina omaly fa nangoron'entana nefa mbola samy mandeha na ny radio na ny tv.
Jentilisa, 18 janoary 2009
Nampidirin'i jentilisa | 18 Hevitra | Trackback (0) | Permalink
Aleo tsy asiako fanamarihana fia dia miandry ny filazan'ny sasany koa.
Ny rohin-kevitra navoakana moa dia tena manamarina ilay lohateny mihitsy. Izaho indray toa te-hiteny hoe : Voa ny VIVA, koa "ny hany heriny" sisa dia ny namitaka".
Nampidirin'i Korio @ 20:44, 2009-01-18 [Valio]
misaotra hatrany miezaka mampahafantatra anay aty ivelany ny fandehan-javatra any an-toerana e!, na somary misy diso aza ny vao² azo voalohany dia mahafinaritra kosa ny fanitsiana apetrakao avy eo, misaotra hatrany.
Nampidirin'i sipagasy @ 08:37, 2009-01-19 [Valio]
Fanaratsiana ny anao no betsaka tsy fitiavana any ANDRY RAJOELINA
Nampidirin'i Rakoto @ 08:48, 2009-01-19 [Valio]
Mahereza Jentilisa a !
Voalohany indrindra dia misaotra an'i Jentilisa aho amin'ny ezaka ataony mampita ny vaovao. Raha maromaro ny mpitoraka bolongana no manao izao ataonao izao dia mba afaka mampitaha vaovao ny olona izay vao miandany atsy na aroa. Aza atao mahakivy ny teny mahery ataon'ny sasany aminao fa fomban-javatra ihany ireny. Toro-hevitra kely : tsaratsara kokoa angamba raha ianao mihitsy no mandeha manatrika ny zava-mitranga fa tsy minakina amin'ny vaovao omen'ny olona hafa, sa ahoana ? Farany, sao dia misy rohy bolongana hafa azonao omena anay mba ahafahanay mahita loharanom-baovao hafa ? Raha izaho manokana mantsy dia aleoko bolongana no jerena fa ireny mba tena olom-pirenena no manoratra azy. PS : ohatrany misy olana ny fandefasana hevitra (commentaire) ato amin'ny bolonganao. Misy erreur foana.
Nampidirin'i CitizenGasy @ 09:22, 2009-01-19 [Valio]
Kabarin'ny Ben'ny tanana
ity misy rohy azo jerena ny kabarin'ny Ben'ny Tanàna http://www.iarivo-town.mg/kabary17.php
Nampidirin'i Naina @ 10:07, 2009-01-19 [Valio]
Ny Tombotsoam-pirenena Jerena
Raha ny resaka filaharana sns dia efa teo no niala ny tenanay..1991...2002, ka antso hoan'ny tanora no tianay hatao: raha nala bacc izahay ny 91 dia tratry ny taona fotsy satria variana nigrevy nenti-kafanampo fotsiny, ny 2002 (marina fa nametrahana ny foloha ankehitriny) saingy haintsika koa ny tambin'izany teo amin'ny fiainana sy fihemoran'ny toe-karena... conclusion: tokony hialana amin'izay ity fihetsika manao sorona vahoaka amin'ny bontolo ity, efa mipetraka ny loi sur les partis dia aoka ny alternance démocratique no hanjaka...Ny toe-karena efa miarin-doha aza potehina satria hoe tsy misy stabilité politique eto M/car ...ny tanjona angamba 1EURO= 50.000 Fmg, sa tsy olana amin-dry zalahy mpanao bontolo izany satria olona manana orin'asa sy manana fidiram-bola azo antoka izy ireo....Dia haratsiana amin'ny kabary koa fa ny vahiny no manjaka @ harena ankibon'ny tany ( zah tsy miaro vahiny an!), fa mba manana ohatrinona moa isika gasy hitrandraka ireny...tsy maintsy ilana investisseur étranger ireny ( IDE) satria tsy manana capital ny tany mahantra toa antsika...firy polotaona ny gasy tsy nahavita nitrandraka ireny ...be famaritra fotsiny saingy tsy mahavita na inona na inona... Ny tanjon'ny fihetsehana dia famotehana ny firenena ary ny fanongam-panjakana: inona no tanjon'ireo goak'antitra miandry tataka amin'i Andry RAJOELINA ireo ?.... Ho antsika tanora aza mety atao fitaovana sao manenina sahala aminay...sao fotsiny no lazaiko: ny madinika mitolona dia tsy mba nisy nanakarena noho ny politika izany... mahasahia milaza raha misy f'izao fotsiny, ny ezaka ataonao no azo antoka, miala miasa sy mitsemboka vao mihinana fa tsy mitanin'andro sy mihaino kabary ambany vavahady fotsiny.... Mboha hitohy...
Nampidirin'i marina @ 11:10, 2009-01-19 [Valio]
Aleo azavaina fa tsy izaho na ny vaovao avoakako no miovaova fa ny an'ny VIVA. Tsara ihany manko ny tsy miteniteny foana fa voatahiry tsara ireny
Nampidirin'i jentilisa @ 12:25, 2009-01-19 [Valio]
Tsy dia olana le mampita vaovao fa mba harao tsara ny zavatra misy na andaniny na ankilany vao miteny fa tsy faly manenjika fotsimy.
Nampidirin'i Mahita @ 19:52, 2009-01-19 [Valio]
@ Jentilisa : mandrisika hatrany koa. Tsy misy olona tonga lafatra, ary zavatra sarotra ity mampita vaovao ity. Ka aza kivy amin'ny fanakianan'ny olona, satria tsy maintsy hisy izany.
Ho an'izay milaza fa "diso" ny zavatra lazain'i jentilisa (Rakoto, Mahita, sns.) : teneno anay izany sy ny fototry ny zavatralazainareo. Dia hitsikafona ho azy ny marina. Raha lazainareo fa "mitsikera" fotsiny izy : porofoy àry fa diso ny teneniny. Raha "fanaratsiana" no ilazaànareo ny zavatra teneniny ... azavao aloha hoe marina sa diso.
Meteza hiady hevitra @ olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena, fa izay koa ilay demokrasia.
Nampidirin'i Korio @ 21:41, 2009-01-19 [Valio]
fa tsy misy procedure legale tokony harahana nga moa raha hoe hi-confisque ny fitaovan'ny viva rafanja e?
genreo hoe mila huissier na hoe mila mandat de depot avy any @ prokirera na tsy haiko?
sa hoe rehefa atteinte a l'ordre pubic dia mi-by pass ny procedure rehetra?
samy sauvage be doly na i tgv na i ra8 ny tena marina ee... tsy maintsy misy maratra anefa ny fiafaran'ity kozy ity.
Aleo aloha hankafy ny baraka fa tsssssssssss
Nampidirin'i simp @ 23:44, 2009-01-19 [Valio]
fanakianana an'i jetlisa
aza faly manakiana fotsiny fa mba jereo ny zavatra alefan'ny MBS vao miteny sady ny fanjakana tia manakiana nefa tsy mahazaka kianina
Nampidirin'i lyfa @ 12:41, 2009-01-20 [Valio]
ho an'i lyfa
@lyfa: tohano ny hevitrao. Manomeza ohatra, ary omeo ny loharanom-baovaonao hiadin-kevitra.
Raha tsy izay dia tsy mari-pototra sy tsao ny filazanao rehetra ("affirmation gratuite" hoy ny vazaha).
Afaka taterinao anay eto koa ange izay lazain'ny MBS e! Tsy mampaninona raha tsikerainao koa. Tsy ny tsikera mantsy no ratsy fa ny manome fanakianana tsy mitombona.
Nampidirin'i Korio @ 20:48, 2009-01-20 [Valio]
Ny resaka procedure tianao lazaina aloha tsy mety tanterahina intsony amin'ny fotoana mikorontana tahaka izao. Hatramin'izao dia tsy nahalala aho fa nandeha tamin'ny ara-dalàna tokoa ny Ben'ny tanàna, tsy nitory tany amin'ny Conseil d'Etat (indrisy toa tsy manana anarana gasy ilay izy) na ny Chambre administrative teo aloha izy. Raha firenena milamina tsy misy fivorivoriana mikendry ny hanongam-panjakana tahaka izao dia izany huissier izany tokoa no tsy maintsy andalovana, saingy mandra-pikenokenona amin'izany lalana izany dia tsy maintsy ovana ny famindra, mikapoka aloha vao mamoaka sy milaza ny antony. Nahoana? Manana mpiaro be dia be ny lasibatra noho izany tsy maintsy ampiasaina ny tetika: mety ho manana mpitsikilo manara-maso any amin'ny fitsarana ilay olona ahafahany mandositra na maka olona hiaro azy.
Amin'izao fotoana izao, tsy hisy vadintany sahy hitonantonana amin'izao olona maimbo ra izao. Matahotra olona ny Malagasy fa tsy matahotra lalàna. Jereo fotsiny ny ataon'ny mpamily manao ny hadalany eny an-dalana rehefa tsy misy mpitandro ny filaminana eo akaiky eo.
Averiko indray, samy diso ny roa tonta matoa tonga amin'izao fetra izao isika. Nisy fanamby napetraky ny Ben'ny tanàna ny sabotsy alina fa tsy maintsy mandeha ny VIVA TV (efa voarara) ny alahady amin'ny fito ora hariva. Tsy hipetra-potsiny eo anoloan'izany ny Fanjakana fa manana ny tetiny ihany koa izy. Tadiaviny ny tsy hampandeha ny VIVA TV na andeha atao hoe potehiny fotsiny izao ny fanamby napetraky ny Ben'ny tanàna. Inona no hita ankehitriny? Tsy tontosan'ny Ben'ny tanàna ny fanambiny dia mihevi-tena mandresy noho izany ny fanjakana: Politika fanorona io mazava loatra.
Marihiko etoana fa tsy misy aloha ny fanambarana ampahibemaso (ofisialy) hatramin'izao fa firenena latsaka an-katerena isika saingy efa tafiditra amin'izany ihany. Rehefa ao anaty politika fanorona ary; nefa toa tsy misy lalàna mazava eo amin'ny roa tonta dia na ninia na tsy fidiny ny nanadinoana ireo mafana fo hiambina ny toerana stratejika anananao. Raha mba nahay namaky, raha nahay nandray ny hafatra - fanampiana ankolaka nataoko no tena marina saingy indrisy tsy nandalo teto angamba ry zareo - tamin'ny soratra nolazaiko tamin'ny folo io hoe: miandry ny mety ho fiambenana ataon'Antananarivo ity toby ity ihany koa aho . Nisy ve izany? Sa naleo aloha hivavaka ny olona? Mety mba ho nisy anie ny tsy nivavaka nefa afaka miandry ny toby e! Io no fahadisoana lehibe nataon'ny mpanohana ny TGV ka nampihemotra azy ara-stratejika amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny VIVA "hanara-dalàna" na somary nanaiky ny sazy na fampitandremana nataon'ny minisitra Bruno Andriatavison amin'izao fotoana izao. (Talata 20 janoary 2009)
Nampidirin'i jentilisa @ 21:46, 2009-01-20 [Valio]
hoan'ireo milaza fa diso ny lazain'jentilisa, mba sahia mamoaka ny marina izay fantatrareo mba ahazoanay tsy any an toerana mamakafaka ny zava nisy marina. hoan'jentilisa, mba tantarao vaovao izay lazain'ny MBS kou izahay ra mba azonao atao. Izany oe mba tianay ho fantatra avokoa ny vaovao momba ny andaniny sy ny ankilany ra mety.
Nampidirin'i likely @ 07:32, 2009-01-21 [Valio]
hoan ireo izay manakina an Jentilisa, mba lazao eto ny marina fantatrareo.
hoan Jentilisa, mba tantarao eto koa izay lazain ny MBS.
Nampidirin'i lingwa @ 08:10, 2009-01-21 [Valio]
valalabemandry aho no miteny fa tena tsy maharaka politika ny havanareo, lol
Ontsa fts aho mahita fa tena mbola be fitiavana sy firaisan-kina ny valalabemandry dia manome zara ny sasany foana :-P
Ity fiambenana no tiako lazaina. Tena garde gratos an ! Tsisy vola am-paosy mivoaka io na omena ny foloalindahy izany raha mangataka ny intervention-ny, na ireo mpiambina privé fa antso avo dia lasa izao. Raha misy ny ôriôra dia meloka izay naninji-tànana t@ vahoaka tànam-polo tsy mba nivatsy fiadiana.
Fa rehefa tonga @ seza fiandrianany kosa izy dia tsy tadidiny intsony hoe "nantsoina dia nampodiana" ange ireto vahoaka ireto fony niambina ny hareny e !
Tena deraiko ilay firaisan-kina fa zah koa mba voa matetika @ io fitiavana ny namanao toy ny tenanao io (tena toetsaina malagasy io) fa efa tokony mba hifoha @ zay kosa isika hoe hatraiza ny fetrany. Sa diso ve aho ?!
Nampidirin'i ikalamako @ 13:48, 2009-01-21 [Valio]
mahafinaritra fa tohizo
ny nahasarika ahy indrindra dia ny fiezahanao hanana fomba fijery objective ato anaty blog, ka ny hany teny dia ny mamporisika anao hanohy hitantara ny zava-misy aminay izay tsy afaka mahita mivantana ny fandehan'ny zava-misy any an-tanindrazana any.
Nampidirin'i tesoro @ 13:15, 2009-01-26 [Valio]
ao no zava misy marina ary malaelo daholo ny vahoaka
Nampidirin'i solo @ 16:07, 2009-02-08 [Valio]